I-Mirror, Arts And Crafts Factory Supplier-SHUNDA - Inani Elihle I-Zinc Alloy Metal Making Accessories I-Metal Smiling Face 13x16mm Charm Pendant Jewelry OEM kanye Nemboni | SHUNDA
Imisebenzi Yezandla Yokhuni
Ibhodlela le-Glass Perfume
I-PVC yokhuni yokwamukela i-Seahorse Animal Beach Door Sign, ...
Ifektri yaseChina i-Triange Emise Ngokhuni Ngodonga Isithombe Sodonga ...
Intengo Enhle I-Zinc Alloy Metal Ukwenza Izesekeli Insimbi...
Intambo Esezingeni Eliphezulu Ene-Coating Metal egoqwayo...
Ubhasikidi Ophethe Ithawula Elimnyama Elineshalofu Ikhishi D...
Ibhokisi Lezinkuni elikhulu eliqediwe eline-Hinged Lid kanye ne-Front Cl ...
Isigaba senyanga esingu-5pcs sisetha ishelufu leshalofu leshelufu leshalofu lenyanga yomjikelezo wenyanga...
ngokhuni acrylic eshelelayo lid ukupakisha isipho Ibhokisi
Amashalofu Amachashazi Afakwe Odongeni Amashalofu Antantayo Okhuni...
Ishalofu Lenyanga Elibekwe Ngodonga elinesibuko I-Bac yensimbi yokhuni...
I-China OEM Abakhiqizi Bebhokisi Lokhuni elingunxande ̵...
I-China OEM Shelf Floating Shelf Suppliers - Wooden ...
Abahlinzeki beshalofu lenyanga le-China OEM Double - Wall...
I-China OEM Wooden Makeup Box Abahlinzeki - Wall...
I-China OEM Wall Hanging Shelf Suppliers - Woo...
I-China OEM Wooden Gift Box Factory - imfashini ...
I-China OEM Wooden Makeup Box Factory - Yokhuni...
I-China OEM Hanging Wall Shelf Factories - Res...
Intengo Enhle I-Zinc Alloy Metal Ukwenza Izesekeli Ubuso Obumomotheka Bensimbi 13x16mm Ubucwebe be-Charm Pendant
Intengo ye-FOB: USD $0.05 – 0.1 / Ucezu |Thola Intengo Yakamuva
Inani elincane le-oda: 1 Ucezu / Izingcezu
Ikhono Lokuhlinzeka: 1000 Ucezu / Izingcezu Ngenyanga
Imbobo: Ningbo, Shenzhen, Guangdong, Qingdao, njll
Imigomo Yokukhokha: T/TL/CD/PD/A MoneyGram Credit Card PayPal Cash Escrow Other
Imininingwane Yokulethwa: izinsuku ezingu-7
I-Wholesale custom Multifunctional Hanging Ibhande Lensimbi Smile Emoticon izingubo Izesekeli For Kids For Izipho
Inombolo yento. I-SD-10255
Incazelo Ubhasikidi Wezithelo
Uhlobo Lwezinto Insimbi
Ubuso buqediwe Qire nge enamathela
I-Wire Dia ngokusho kwemikhiqizo noma okwenziwe ngezifiso
Usayizi eyenziwe ngokwezifiso
Umbala Okumnyama, okumhlophe, isiliva, njll
OEM & ODM Kuyamukeleka
Isikhathi sokuthumela Cishe izinsuku ezingu-10 zokusebenza ngemva kokuthola idiphozi
Isikhathi sokukhokha TT, paypal, veem, Escrow, wester union, ukheshi, njll
Iworkshop & Production Line
I-SHUNDA Crafts ikhiqiza, ithekelisa futhi ihlinzeka ngazo zonke izinhlobo zesibuko (Isibuko Sengilazi, Isibuko Senyanga, Isibuko Esineshalofu, Isibuko Sensimbi Yohlaka, njll. Ibhokisi, njll) Imisebenzi Yezandla Yensimbi ( Ishalofu Lensimbi, Ishalofu Lephaneli Lensimbi, Ubhasikidi Wezithelo Zensimbi, Isibambi Sezithelo Zensimbi, Isibambi Sephepha Lezicubu Zensimbi, njll) Imisebenzi Yezandla Yengilazi (Ibhodlela Lengilazi, Ibhodlela Le-Perfume Lengilazi, njll) , Imisebenzi yezandla yeresin kanye nemihlobiso yeCeramic noma izipho UKhisimusi, i-Halloween, iPhasika ne-Valentine nokunye. Ngesipiliyoni seminyaka eminingi nemizamo, sesithuthuke saba uchungechunge lokuhlinzeka ngezimboni zokuhlobisa ikhaya, kanye nokumaketha okuhlelekile kweketango lezimboni, okuhlanganisa isibuko, ishalofu, izibani kanye nemikhiqizo ehlobene. Futhi sinesistimu yokuphatha ikhwalithi eqinile egcwele yokulawula zonke izinyathelo ezivela ezintweni, amasampula, ukukhiqiza, ukupakisha ukuthunyelwa ukuze kuqinisekiswe yonke imikhiqizo ngokuphelele.
Sigcizelela isimiso samakhasimende kuqala, ikhwalithi kuqala, intengo engcono kakhulu kanye nenkonzo. Futhi sithemba ukusungula ubudlelwano bebhizinisi besikhathi eside nawe.
Sineziteshi eziqinile ze-supply chain kanye nomugqa womkhiqizo ophelele, ongahlangabezana nezinhlobo ezahlukene zezidingo zamakhasimende.
Sineqembu eliphakeme labaklami, amakhono okuthuthukisa umkhiqizo omkhulu, ubuchwepheshe bokukhiqiza obusezingeni eliphezulu, ithimba labadayisi elichwepheshile ukuze sinikeze amakhasimende izisombululo zesevisi eyodwa-stop.
Njengamanje, sinokubambisana okujulile nezinkulungwane zamabhizinisi asezingeni eliphezulu ekhaya naphesheya. U-80% wemikhiqizo yethu ithunyelwa kwamanye amazwe. Wonke umuntu we-SHUNDA uhlala ekwethembisa isimo esihle ngobungcweti, ukwethembeka, nokusebenza kahle okuphezulu. Siyakholwa ukuthi sizoba uzakwethu othembekile esikhathini esizayo.
Ukuthumela kwamanye amazwe siphinde sibe neqembu lokuhweba eliqeqeshiwe kanye nethimba le-R&D elihlala lisebenza enkonzweni yakho. Sihlinzeka ngesevisi eqinisekisiwe yokuthenga, ukucubungula nokuhlela ukuthunyelwa kwezimpahla. Senza ukuthunyelwa ngezindleko eziphansi, isikhathi esifushane kanye nezinto zokuhamba eziphephe kakhulu. Ukwaneliseka kwakho kungamandla ethu amakhulu nokuvuna!
1. I-OEM & ODM, Noma yiziphi izibuko zingenziwa ngezifiso ngombala, usayizi.
2. Umbuzo wakho owenziwe ngempela emikhiqizweni yethu noma amanani azophendulwa ehoreni elingu-1.
3. Ikhwalithi Engcono Kakhulu, intengo encintisanayo kanye Nokulethwa Ngesikhathi.
I-Shunda Home Decoration ifektri ingumphakeli wesibuko ochwepheshe ohlinzeka ngokukhiqiza, ukuklama, ukuthengisa kanye nesevisi yangemuva kokuthengisa kumakhasimende omhlaba. Inkampani yethu igxile ekukhiqizeni nasekuklameni zonke izinhlobo zemikhiqizo yesibuko njengesibuko esiyindilinga, isibuko senyanga esiyisigamu, amasethi esibuko senyanga njll.esetshenziswa kabanzi Ekhaya, izakhiwo zamahhovisi, izitolo ezinkulu, izitolo ezinkulu, izikole, iphrojekthi yamahhotela, futhi sihlinzeka ngezinsizakalo zebhizinisi ze-OEM ne-ODM.
Ikhwalithi ephezulu, imikhiqizo yamanani ancintisanayo kanye nesevisi engcono kakhulu kuwumsebenzi wethu ongakhathali. Finyelela okuhlangenwe nakho ekukhiqizeni kwesibuko nokuthumela ngaphandle kholwa ukuthi kungakunikeza isipiliyoni esihle sokubambisana. Ngokusebenza kahle kwenoveli, izitayela ezihlukene kanye nenkonzo ecabangelayo,imikhiqizo yethu iwine i-pralse nokwethenjwa kwamakhasimende ethu, Bheka phambili umlayezo wakho futhi wamukelekile e-China.
A: Imboni. Silwela ukuba yimboni ehamba phambili embonini yokuhlobisa ikhaya yezobuciko nezobuciko ngokusungula izinto ezintsha, ubungcweti, ikhwalithi kanye namanani okuncintisana.
2. Ngingathola isampula ye-oda yesibani se-LED?
A: Yebo, siyakwamukela uku-oda kwesampula ukuze sihlole futhi sihlole ikhwalithi. Amasampuli ahlanganisiwe ayamukeleka.
3. singayiqinisekisa kanjani ikhwalithi?
A: TT, paypal,veem,wester union,Escrow, cash, njll
A: Kuma-oda amancane, i-express izoba engcono kakhulu; Nge-oda lenqwaba, ezokuthutha zasolwandle zizoba yisinqumo esingcono kakhulu mayelana nesikhathi sokuthumela. Mayelana nama-oda aphuthumayo, siphakamisa ngomusa ezokuthutha ngendiza kanye nesevisi yokulethwa ekhaya izohlinzekwa ngozakwethu womkhumbi.
Okwedlule: I-Metal Wire Yekhwalithi Ephakeme Ene-Coating Metal egoqwayo egoqekayo Ishelufu Lesitoreji Sensimbi Esitholakala
Olandelayo: Izesekeli Zekhwalithi Ephakeme Zokwenza Insimbi Yensimbi Yezinhlamvu Zeqhwa I-Charm Pendant Zinc Alloy Jewelry
ubucwebe be-zinc alloy
Isesekeli Sokwenza Insimbi Yekhwalithi ephezulu yeZinc...
Izesekeli Zokwenza Insimbi Zekhwalithi Ephakeme I-Metal Alp...
Izesekeli Zokwenza Insimbi Zekhwalithi Ephakeme I-Metal Dia...
I-PVC yokhuni yokwamukela uphawu lwe-Animal Beach Door...
I-Wholesale custom Multifunctional Hanging ...
Ubhasikidi Olengayo Wezingqimba Ezintathu...
uphawu lwamapulangwe olulengayo lukaKhisimusi ngokubambisana...
Umphakeli waseChina ama-4pcs usethe isigaba senyanga eyindilinga ...
Ikheli: NO.158WANGCHAO RD SHANGCHENG DISTRICT, HANGZHOU CHINA.